Wararka Archives - Page 1384 of 1406 - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Soomaalida Minnasota oo dacwad ka gudbiyay Shirkada Amazon
Faysal Ali Axmed (Alteeso)- November 24, 2018
Soomaalida dalka Mareykanka ee ku nool Magaalada Minnasota ayaa dacwad ka dhan ah Shirkada Amazon ka gudbiyay iyagoo ku eedeeyay in ay si uun...
Dagaal sokeeye oo laga cabsi qabo in uu ka dhaco Itoobiya (Sababta)
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Tigreyga ee Itoobiya, Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyey dowladda Federal-ka ah in ay xoogag shisheeye kala shaqeyneyso sidii loo wiiqi...
Laba arrin midbey ku danbeyn doonta Itoobiya “Gen. Jamac M. Qalib”
General Jaamac Maxamed Qaalib, ayaa markii u horaysay ka hadlay isbedelada ka socda Itoobiya iyo rajada xidhiidh isfaham oo dhex mari kara Itoobiya iyo...
Sidee dhallinyarada Somalia ee la askareynayo lagu geeyaa dalka QATAR?
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa loo qaadaa dalka Qatar, iyadoo loo sheego inay halkaasi ka qabanayaan shaqo amaan oo ay dhaqaalo badan ku qaadanayaan. Dhalinyaradaasi...
MW Farmaajo oo lagu wado in uu maanta soo gaaro magaalada Kampala inta aanu...
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho aan horey loo shaacin ku tagey Turkiga isagoo la kulmay dhigiisa dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Labada madaxweyne oo...
Waxaa farxad ah in markii ugu horreysay warbixin qiimo leh (i tus iyo i taabsii) ee ku saabsan Maamulka Miisaaniyadda 2018 ka soo baxdo...
Ciidamo Itoobiyaan dheeraad ah oo caawa lagu biiriyay ilaalada Kusimaha Madaxweynaha KG iyo ku Xigenadiisa
Axmed Nageeye- November 23, 2018
Caawa aya waxa isbadal lagu sameeyeyay ciidamada Ilaalada Kusimaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Konfur Galbeed isla markaana ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Cabdulqaadir Sharif Shiikhunaa. Ciidanka caawa...
RW Kheyre iyo Wasiir Beyle oo caawa u qeybiyay lacago laaluush ah xubno ka...
Faysal Ali Axmed (Alteeso)- November 23, 2018
Warar lagu kalsoon yahay oo an goor dhow ka helnay ilo wareedyo ku sugan xafiiska RW Kheyre aya MOL u xaqiijiyay in caawa xafiiska...
Guuto Ciidanka Military-ga Eritrea ah oo kusoo wajahan Muqdisho iyo Baydhabo.
Sida uu sheegey La-taliyaha amniga qaranka ee Madaxweyne Farmaajo Mudane Cabdi-Saciid Muuse ayaa waxaa dhawaan la filayaa in Guuto Ciidanka Military-ga Eritrea ah ay...
Boqortooyada Sucuudiga oo xiisad siyaasadeed ka dhex abuurantay
Iyadoo ay jirto kacdoon caalami ah oo ku aaddan dilka saxafiga Jamaal Khaashuqji, ayaa qaar ka mid ah qoyska reer Aala Sacuud waxay billaabeen...
1...1,3831,3841,385...1,406Page 1,384 of 1,406